Websa’itiin DhRTVO-Dhaabbata Raadiyoo fi Televizhinii Oromia ukkaafame www.orto.gov.et -
Websa’itiin DhRTVO-Dhaabbata Raadiyoo fi Televizhinii Oromia ukkaafame www.orto.gov.et
bilisummaa December 28, 2015	1 Comment
‪#‎OromoProtests‬-Oromia Radio and Television Organisation website has been hacked by Oromohacktivist-go to the website- www.orto.gov.et
Maddi Ololaa OPDO kan ta’ e website Oromia Radio and Television Organisation humna diddaa fi mormii barattootaa deeggaruun butamee jira; yeroo ammaa sirbi Eebbisaa Addunyaa irraa dhagayama ajira: “siifin lolaa Oromoo narra hin gortu!” jedhu irraa dhagayamaa jira.
Previous #OromoProtests students wounded by soldiers last night KILL 2OO MORE
Next Mormiin Oromoo itti fufuun har’a Mudde 28, 2015 barattoonni Hidhabuu Aboo ( Kaaba Shawaa) bif kanaan morman.
Tahuu qaba.Duraayyuu nidhibaawe.Amma booda waal eeguu isaati.kan boruus isa qabatu ummata isaa waan taheef.Kuni dhugaa yeroon itti gubate waan taheef itti fufee gara sochii ummata isaa deebi’uu qaba.Walmalee hinqabnu.Jabaadhaa jajjabaadhaa.
Akkasuma qaamni OPDO kamuu saba ummata isaa irratti duuluu akka dhaabbatu dhaamsa waliif dabarsuu qabu.Hundi keessanuu galanni keessan Wlabummaa Oromiyaa haa ta’u.